GitHub kpochapụrụ youtube-dl wee mee ihe iji zere mkpọka na-enweghị isi | Site na Linux
- GitHub eweghachila ohere ịbanye na ebe nchekwa youtube-dl, nke egbochiri ọnwa gara aga site na mkpesa sitere na Recording Industry Association of America (RIAA), bụ onye boro ndị mmepe ọrụ a nke imebi iwu US Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
Mmepe nke youtube-dl laghachiri na GitHub, gbakwunyere onye nrụpụta mekwara nchekwa na GitLab ma jiri ya mee ihe na nsụgharị mgbe ọ dara, na-ebufe ya na nbudata nkeonwe.
E wepụrụ mkpọchi ahụ mgbe ndị mmepe mere mgbanwe iji wepu nbudata ule ndị a kpọtụrụ aha na mkpesa RIAA.
Ka anyị cheta na isi ihe kpatara mgbochi ahụ bụ ọnụnọ na youtube-dl nke koodu iji nyochaa nzi ezi nke ọrụ ahụ, na-eji ihe dị na nbudata ule, nke nwebisiinka nke ndị RIAA sonyere.
GitHub kwuru na emeghela nchekwa ahụ mgbe agbakwunyere ozi ndị ọzọ site ndị ọka iwu maka Electron Frontier Foundation (EFF), nke gbachitere youtube-dl.
Akwụkwọ ahụ na-arụ ụka na oru ngo ahụ adịghị emebi DMCA n'ihi na ntinye aka nke ezoro ezo nke YouTube abụghị usoro mgbochi idetuo ya na ebubo nkwenye ahụ dị ka ihe ziri ezi.
Youtube-dl anaghị etinye akwụkwọ nke ihe edepụtara na mkpesa, mana naanị nwere njikọ ha, nke enweghị ike ịtụle dị ka ịda iwu nwebisiinka, ebe ọ bụ na ndị a E gosipụtara njikọ na nyocha nke ime nke anaghị ahụ ndị ọrụ njedebe.
Ọzọkwa, mgbe ị na-agba ọsọ nyocha, youtube-dl anaghị ebudata ma ọ bụ kesaa ọdịnaya niile, kama ọ na-agafe obere sekọnd ole na ole iji nyochaa ọrụ.
Nkwupụta ahụ bụ na a na-emepụta youtube-dl kpọmkwem dị ka akụrụngwa iji mebie usoro ojiji nke ọdịnaya ikikere, ịgafe usoro nchebe abụghịkwa eziokwu, ebe ọrụ ahụ anaghị agụnye ụzọ iji kpochapụ usoro vidiyo ejiri teknụzụ DRM rụọ ọrụ. .
Ihe a na-akpọ "ntinye aka ezoro ezo" na mkpesa ahụ enweghị ihe ọ bụla metụtara nchedo oyiri, izo ya ezo ma ọ bụ igbochi nnweta ọdịnaya echekwara, mana ọ bụ naanị mbinye aka vidiyo vidiyo YouTube nke enwere ike ịgụ na Koodu ma gosiputa vidiyo a.
Iji zere mkpọka na-erughịrị mmadụ ọzọ dabere na mkpesa ndị na-ezighi ezi na-egosi Imebi nke DMCA, GitHub emewo mgbanwe na usoro maka ijizi arịrịọ mkpọchi:
A ga-enyocha ihe mkpọchi ọ bụla dabere na ngalaba DMCA Nkebi nke 1201 site na ndị ọkachamara teknụzụ, gụnyere ndị ọkachamara sitere na ya, ndị ga-ekwenye na ihe mkpọchi ahụ gafere usoro nchekwa teknụzụ.
A ga-enyocha akwụkwọ mkpesa site n'aka ndị ọka iwu maka ebubo na-enweghị isi, ebubo ndị na-abụghị DMCA.
Maka nkwupụta na-edoghị anya, ọ bụrụ na enweghi ihe akaebe doro anya nke ngabiga nchebe na-akwadoghị, a ga-eme mkpebi maka ndị mmepe na ebe nchekwa ahụ agaghị egbochi.
Maka nkwuputa nkwado, GitHub ga-agwa onye nrụpụta ahụ ma nye ohere iji gbaghaa ebubo ahụ ma ọ bụ dochie ebe nchekwa ahụ tupu etinyere nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na enweghị nzaghachi, GitHub ga-anwa ịkpọtụrụ onye nrụpụta ọzọ tupu ịmechie mkpọchi ahụ. Mgbalị ịkpọtụrụ onye nrụpụta ga-aga n’ihu mgbe emechiri mkpọchi ahụ, onye nrụpụta ga-enwe ohere ịlaghachi ebe nchekwa ahụ azachaa azịza ndị ahụ.
Ndị mmepe nke ebe nchekwa akpọchiri ga-enwe ikike ịbupụ mbipụta, PR, na data ndị ọzọ na-enweghị ọdịnaya na-akwadoghị.
A ga-agwa ndị ọrụ GitHub ka ha zaa ngwa ngwa maka arịrịọ ndị nrụpụta gbasara okuku. A ga-enye ndị dị otú ahụ ihe kachasị mkpa iji weghachite nnweta ozugbo enwere ike mgbe azịzachara azịza ha.
Ọzọkwa, GitHub kwupụtara ọkwa nke Ntọala iji chebe ndị mmepe site na ebubo na-enweghị isi imebi nke DMCA Nkebi 1201.
A na-atụ anya ka Foundation ahụ nye aka ndị mmepe nke oru efu ma kwuta ugwo nke agbachitere iwu ma ọ bụrụ na ọ ga-akwụ ụgwọ.
E nyere otu nde dollar na ntọala GitHub. A na-atụ aro ntọala a site na nsonye nke ndị nnọchi anya obodo, dị ka ụlọ ọrụ na-enweghị uru Software Freedom Law Center na Electron Frontier Foundation (EFF), nke na-enye nchebe iwu maka ọrụ efu na ịgbachitere ọdịmma nke ndị mmepe enwewo mkpọka n'ihi akụkọ banyere mmebi iwu DMCA.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » GitHub kpochapụrụ youtube-dl wee mee ihe iji zere mkpọka na-enweghị isi
Ọfọn, ọ dịghị ihe dị mma karịa youtube-dl ibudata vidiyo na egwu egwu paireti.
Na-enyocha 256 bit SHA hash nke youtube-dl na utu aha nke ".bashrc" (M na-akpọ ya chyt; lelee mbinye aka GPG ọbụlagodi na iji "youtube-dl -U"):
utu aha chyt = 'Ntuziaka = $ (nke youtube-dl); sha256sum $ Ntuziaka &> / dev / null; ikwughachi -n "HASH:" && gụọ HASH; ikwughachi "$ HASH $ Ntuziaka" | sha256sum –check '
Maka egwu na-eji FFmpeg:
utu aha piratiar = 'youtube-dl –ignore-error –yes-playlist –output «% (title) s.% (ext) s» –youtube-skip-dash-manifest –extract-audio –audio-format vorbis –audio- ogo 9 -prefer-ffmpeg '